Turtlico, mianatra hevitra fototra momba ny fandaharana amin'ny fomba tsotra | Ubunlog
Turtlico, mianara hevitra fototra momba ny fandaharana amin'ny fomba tsotra
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery Turtlico isika. Ity dia fitaovana ampiasain'ny mpampiasa afaka mianatra ny fototry ny fandaharana isika. Ity rindrambaiko ity dia hamela antsika hamorona programa amin'ny alàlan'ny kisary ihany. Fanampin'izany, fitaovana maimaim-poana sy malalaka izy io, izay ho hitantsika ho an'ny Gnu / Linux sy Windows.
Amin'ity programa ity dia afaka manao saika na inona na inona isika, manomboka amin'ny sary tsotra ka hatramin'ny lalao sarotra. Turtlico dia azo itarina amin'ny alàlan'ny plugins izay afaka manampy kisary fanampiny amin'ny programa. Ohatra, ny plugin RPi naorina dia manampy baiko hifehezana ny GPIO amin'ny alàlan'ny tranomboky gpiozero. Ny fampahavitrihana sy ny fanesorana ny plugins dia atao amin'ny fananana tetikasa.
1 Toetra ankapoben'ny Turtlico
2 Mametraka Turtlico amin'ny Ubuntu
Toetra ankapoben'ny Turtlico
Ny fandaharana Izy io dia ao amin'ny kinova 1.0 ankehitriny, izay ahitana fanatsarana sy fanitsiana lehibe raha oharina amin'ireo dikan-teny teo aloha.
Miaraka amin'ity fitaovana ity na iza na iza afaka mianatra ny fototry ny fandaharana.
Ity dia fampiharana cross-platform, izay dia misy amin'ny Windows sy Gnu / Linux.
Hanomboka hamorona ny zavatra ataontsika, dia ilaina fotsiny ny mametraka ny kisary amin'ny filaharan'ny fandaharana.
Turtlico koa manana plugin ho an'ny fandaharana Raspberry Pi GPIO sy plugin multimedia.
Ireo mpampiasa efa za-draharaha dia afaka manoratra plugins vaovao, ary hanitatra bebe kokoa ny fahafaha-manao.
Miaraka amin'ity rindrambaiko ity afaka mamorona sary tsotra ianao fa afaka mamorona lalao sarotra ihany koa. Turtlico dia manome fiasa maro izay hanampy anao hampiaina ny hevitrao.
Kisary sasany (ohatra, tady, isa) manana sanda azo ovaina. Azonao atao ny manova io sanda io amin'ny fanindriana ny fanalahidy F2 eo amin'ny kisary na amin'ny fipihana ny safidy Hanova, izay ho hitantsika ao amin'ny menu contextual.
Ao amin'ny firaketana ny tetikasa, azo jerena famaritana ny kisary azon'ny mpampiasa ampiasaina, ary fampahalalana bebe kokoa momba ny fampiasana Turtlico.
Nisy izany nampiditra ny fampiharana amin'ny GTK 4 sy Python.
Ankehitriny a fanaraha-maso bibikely marina kokoa amin'ny programa noforonin'ny mpampiasa.
ny firaisana ara-maso amin'ireo kisary mifandray.
Ny programa dia hamela antsika hampiasa ny sasany fitambaran-kitendry miasa milamina kokoa.
Ity dikan-teny ity dia ahafahantsika mametraka ny cursor eo ambonin'ireo kisary, to Asongadino ny code python anao amin'ny topi-maso.
Haneho antsika boaty fifanakalozan-kevitra amin'ny hitsin-dàlana.
Rehefa amboarina araka izay tiantsika ny tetikasa dia tsy maintsy manao izany isika tsindrio ny bokotra «Run»Mba hanao izany.
Afaka manao maka hevitra amin'ny sasany ohatra mahaliana hijery sy hamakafaka.
Mametraka Turtlico amin'ny Ubuntu
Raha toa ianao ka liana amin'ny fianarana ny foto-kevitra fototra fandaharana amin'ny fomba tsotra, dia mety ho hitanao fa mahaliana ny mahafantatra sy apetraho ny fitaovana fandaharana haingana Turtlico amin'ny Ubuntu, amin'ny alàlan'ny fonosana Flatpak. Raha mampiasa Ubuntu 20.04 ianao ary mbola tsy manana teknolojia Flatpak alefa amin'ny rafitrao dia afaka manohy ianao The Guide momba izany izay nosoratan'ny mpiara-miasa iray tao amin'ity bilaogy ity vao haingana.
Araka ny nolazaiko, Turtlico dia azo alaina amin'ny fonosana Flatpak amin'ny Flathub. Rehefa afaka mametraka ity karazana fonosana ity amin'ny rafitra misy antsika isika dia mila manokatra terminal (Ctrl + Alt + T) ary manatanteraka ireto manaraka ireto mametraka baiko:
flatpak install flathub io.gitlab.Turtlico
Ity baiko ity dia hametraka ny kinova farany navoakan'ity programa ity amin'ny rafitray. Rehefa vita ny fametrahana dia afaka atombohy ny programa avy amin'ny menio Applications / Activities, na avy amin'ny launcher hafa izay azonay amin'ny fizarana anay. Ho fanampin'izay, afaka manomboka izany koa isika amin'ny fanoratana amin'ny terminal (Ctrl + Alt + T):
flatpak run io.gitlab.Turtlico
Para esory ny fonosana flatpak izay nampiasainay tamin'ny fametrahana, ilaina ihany ny manokatra terminal (Ctrl + Alt + T) ary manatanteraka ity baiko manaraka ity:
sudo flatpak uninstall io.gitlab.Turtlico
Turtlico dia tetikasa noforonina miaraka amin'ny hevitra hahatonga ny fianarana kaody ho mahafinaritra sy mampientam-po. Ireo mpampiasa izay te hahafantatra bebe kokoa momba ity programa ity dia afaka manatona ny tranokalan'ny tetikasa. Ho hitantsika ao anatin'izany koa ny firaketana ny programa, izay ahafahantsika mahita ny foto-kevitra fototra hampiasana ity rindrambaiko fandaharana haingana ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Turtlico, mianara hevitra fototra momba ny fandaharana amin'ny fomba tsotra
Mametraka Mosaic Browser: angano ara-tantara mbola velona
Araka ny efa nampoizina dia tonga tao anatin'ny herinandro mangina ny Linux 5.16-rc8 ary hisy version stable ao anatin'ny fito andro.